Al-Jafr (book) - ဝီကီပီးဒီးယား
al-Jafr တစ်ဆန်းကြယ်မှုများဖြစ်ပါသည် ရှီ သည်သန့်ရှင်းသောစာအုပ်   အသုံးပြုပုံရှီအာယုံကြည်ချက်အရသိရသည်ပြုစု လီ နှင့်ကနေသူ့ကိုအားဖြင့်အမွေဆက်ခံ မိုဟာမက် ။  al-Jafr အတိတ်အနာဂတ္တိကျမ်းအမျိုးမျိုးစာအုပ်များထားရှိမည်နှင့်စာအုပ်များမိုဟာမက်, အလီနှင့်ထံမှအမွေဆက်ခံခဲ့ကြသည်ရသောနှစ်ခုအသားအရေသေတ္တာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း Fatimah ယင်းမှ Ahl Al-Bayt တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုအတူ အီမာမ် အဖြစ်ကောင်းစွာ, သူ့သေယခင်မာမ်မှသူတို့ကိုလက်ခံရရှိ မိုဟာမက်၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့်လက်နက်များအဖြစ်။  
al-Jafr ကဝယ်ယူသည့်သတင်းရင်းမြစ်နှင့်အသိပညာ၏ဇစ်မြစ်၏တဈခုဖွဈသညျ 12 အီမာမ် နှင့်အီမာမ် Ja'far Al-Sadiq မိုဟာမက်၏ဝှက်ထားသောအသိပညာဖွဲ့စည်းကြောင်း Al-Jafr ၏အပိုင်ရှိခြင်းအတွက်မာနထောင်လွှားယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါနောက်ပိုင်းတွင်အီမာမ်အလီများက၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်၌ကျန်ကြွင်းခဲ့သည့် Al-Jafr ၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်စာအုပ်မှအချိန်များတွင်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသောခဲ့ကြသည်နှင့်အီမာမ်နှင့်အတူ Al-Jafr ၏တည်ရှိမှုအတွက်ယုံကြည်ချက်ရှီအာသည်နှင့်အညီ, ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြစ်ခဲ့သည်။    
အဆိုပါအီမာမ်လည်း Al-Jafr ထံမှ Huruf ၏သိပ္ပံ (ထိုအက္ခရာ၏အက္ခရာ) သင်ယူနှင့် Al-Jafr ထံမှအချက်အလက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများရယူထားခြင်းအားဤသိပ္ပံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 
al-Jafr ဟာအီမာမ်နှင့်ရှီအာတို့တှငျအဆင်းပေးအပ်ခဲ့တာက "ဝှက်ထားသော" အီမာမ်၏အပိုင်လက်ရှိယုံကြည် Muhammad al-မာ့ခ်ဒီ ။  
၃ Al-Jafr ရဲ့တည်ရှိမှုကိုစွပ်စွဲရှီအာ hadiths
ပစ္စည်း၏Jafr သည်သားရေများအတွက်အရေးအသားကနေလုပ်တိရစ္ဆာန်အသားအရေ သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို"Jafr"နိုင်ပန်း၊ဂဏန်းသင်္ကေတ၊သိပ္ပံကိန္းဂဏန်းသင်္ကေတစာ၊ numerology၊သိပ္ပံများ၏အက္ခရာများ၊တောင်အာဖရိကသင်္ကေတသို့မဟုတ် နိမိတ်။ ကို"အယ်လ်"ကိုဆိုလိုသည်"အ"။
Al-Jafr ရဲ့ contents များပါဝင်သည်:
မိုဟာမက်, အတိတ်အနာဂတ္တိကျမ်းနှင့် 12 အီမာမ်များ၏အသိပညာ။
မူရင်း Injil (ယေရှု၏သန့်ရှင်းသောအစာအုပ်), မူရင်း ရာကျမ်း (မောရှေ၏သန့်ရှင်းသောအစာအုပ်), မူရင်း Zabur (ဒါဝိဒ်၏အဘို့သန့်ရှင်းစာအုပ်), မူရင်း Suhuf အီဘရာဟင် (အာဗြဟံ၏ကျမ်းလိပ်) နှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းများ၏အသိပညာနှင့်သမိုင်း, ဘဝအဖြစ်အပျက် နှင့်အခြားအထူးဆန်းကြယ်မှုများကိစ္စရပ်များ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ Al-Jafr ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ပါရှိသောကြသည် Al-Jafr Al-Abyadh (အဖြူရောင် Al-Jafr) ကိုခေါ်။ , al-Jafr Al-Abyadh 14 ဝေမျှရှိပြီးတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ကို 14 ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။  
မိုဟာမက်၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့်လက်နက်များပါရှိသည်သောအိတ်, ထားအပါအဝင် Zulfiqar နှင့် ပတ်သက်. အစ္စလာမ့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို, ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စစ်ပွဲများပတျသကျ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ Al-Jafr ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ပါရှိသောကြသည် Al-Jafr Al-Ahmar (အနီရောင် Al-Jafr) ကိုခေါ်။ ,
၏အသိပညာ အစ်စရေး ပညာရှင်များ။
Al-Jafr ရဲ့တည်ရှိမှုကိုစွပ်စွဲရှီအာ hadiths[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ပါများမှာ hadith Al-Jafr ၏တည်ရှိမှု၏အထောက်အထားများ:
Shaykh Kulayni narrates မှဘူ-ပသည္ကြောင်းင္ငံ ပျက်ကွက်-ရ္ရီဟမ္ဒါနီ က"ငါ့သား၊ အလီ၊အကြီးဆုံးနှင့်ချစ်သူတို့၏ငါ့သား။ သူဖတ် Jafr တို့နှင့်အတူငါ့ကိုနေစဉ်၊အဘယ်သူမျှမမှလွဲရောဖက်( လႅာဟ္)နှင့်သူ၏ဆက်ကြည့်မှာပါ။"
ဒါဟာသက်ဆိုင်အပေါ်အခွင့်အာဏာ၏`Abdullāh ရွဗ္ေ Sinān ကရွီလိုက္ျ 'far-Sādiq ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သူ့ကိုလှုပ်ရှားမှုများကို၏မြေး၏ အယ်လ်-ပသည္ နှင့်လည်းအယ်လ်-Jafr:"အားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားငါကျိန်ဆို;ကျနော်တို့စောင့်နှစ်ဦးစာရွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အရေခွံ၏ဆိတ်များ၊သိုး။ အဲဒီနှစ်ခုစာတမ်းအ dictation၏အက်ာ္ရွိနှင့်အတူလက်၏(အစြန္း)`Alī။"
အစြန္းကျန်ရစ်တိတ်အတွက်ခဏတစ်ပြီးနောက်ကပြောပါတယ်၊"ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိအယ်လ်-Jafr။ သူတို့ဘာကိုသိ-Jafr?" ကျွန်တော်မေးသည်၊"အဘယ်သို့သောအစဥ္-Jafr?" အစြန္းကပြောပါတယ်၊"ဒါဟာတစ်ဦးကွန်တိန်နာ၏လုပ်သားပါဝင်သောအသိပညာ၏ပရောဖက်နှင့်အ executors မိမိတို့၏သေတမ်းစာ။ ဒါကြောင့်ပညာအတတ်ပညာရှင်အတိတ်အတွက်အနေဖြင့်အာဗြဟံ။"
တစ်အရေအကျွန်ုပ်တို့လူအများနောက်ခံစကားပြောကနေဒီဗီဒီယိုရွဗ္ေဗေဝလာဒသ္မွလီရွဗ္ေ-Hakam ကနေအယ်လ်-ပါက္ရန္ဘူ'ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသမား 'whoေျပာပါတယ္ကြား ဘူ'Abdallah ပြောပါ:"ငါနှင့်အတူအဖြူ Jafr။" အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟုသူမေးတဲ့"ဘာအတွက်လဲ?" အစြန္းကပြောပါတယ်၊"ဒါဟာရှိပါတယ်ဆာလံဒါဝိဒ်၏အဆိုပါတွေ့ရှိရ၏၊အရှင်ယေရှု၏၊အစာအာဗြဟံ၏၊ထိုဥပဒေများအကြောင်းကိုရှင်းပြမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်။"
မိုရွဗ္ေတာ္မွရှိပါတယ်နောက်ခံစကားပြောကနေဒီဗီဒီယိုရွဗ္ေဗေဝလာဒသ္ေနေရွဗ္ေ Mahbub မွရွဗ္ေပ 'ab မှဘူ'Ubaydah ခဲ့သူဟုဆိုသောလူအထဲကနေကျွန်တော်တို့အုပ်စုမေးဘူ'Abdallah က Jafr နှင့်အစြန္းပြောပါ:"ဒါဟာအရေပြား၏အပြည့်သောအသိပညာ၏။"
လီရွဗ္ေအသက္စေတးခဲ့သက်ဆိုင်ကနေတာ္ရွဗ္ေ'ယုံကြည်ခြင်းကနေရာက္လည္ပတ္မႈကနေလူတစ်ဦးအကြောင်းသူဖော်ပြခဲ့မွ Sulayman ရွဗ္ေ Khalid မှဘူ'Abdallah သူပြောပါ။ "အ Jafr သောသူတို့ပြောသေချာပေါက်စိတ်ပျက်စေလို့သူတို့(အ Zaydis)မၼာတနေစဉ် Jafr ဆံ့ပါဘူး။ သူတို့ကိုရောက်စေဖို့အလင်းပင္ဆင္ႏအရင္ဆုံးျအလီနှင့်သူ့စည်းကမ်းအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏လျှင်သူတို့တစ်တွေသစ္စာ။ အကြောင်းကိုသူတို့ကိုမေးမြန်းသော(အမွေ)၏အဖေနှင့်မိခင်ဒေါ်။ သူတို့ကိုပြသ Mushaf၏တပ္မေ။ အတွက်အဆက်ဆက်ရှိအလိုတော်၏တပ္မေ။ အတူရှိ Armaments၏အက်ာ္ရွိသည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအဆုံးဟူသော၊အမြင့်ဆုံးသော၊ဟုဆို၊"ယူတဲ့စာအုပ်၊ထင်ရှားဒီအခြင်းမပြုမီ၊သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အထောက်အထားအပေါ်အခြေခံပြီးအသိပညာကိုထောက်ပံ့ဖို့အသင့်ယုံကြည်ချက်၊အလျှင်အမှန်စင်စစ်သင်သစ္စာ"(အမာမ္ဟိုစိုင္း ၄၆:၄)။
အရေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုး၏ရှိပါတယ်နောက်ခံစကားပြောကနေဒီဗီဒီယိုရွဗ္ေဗေဝလာဒသ္မွလီရွဗ္ေ-Hakam ကနေအယ်လ်-ပါက္ရန္ဘူ'ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသမားများ'ရှိသူကပြောကြားဘူ'Abdallah ပြောပါ:"ငါနှင့်အတူအဖြူ Jafr။" အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟုမေးည့္သည္ေ"ဘာအတွက်လဲ?" အစြန္းကပြောပါတယ်၊"ဒါဟာအကြွင်းဒါဝိဒ်၏အဆိုပါတွေ့ရှိရ၏၊အရှင်ယေရှု၏၊အစာအာဗြဟံ၏၊ထိုဥပဒေများအကြောင်းကိုရှင်းပြမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ရေးပါနှင့် Mushaf၏ဒေရာ၊မထင်ရှိနေရာကနေသာျ။ ဒါကြောင့်၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်လူအကြှနျုပျတို့ကိုအဘို့ပြုမှသူတို့ကိုအကြောင်းဒါကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်လိုအပ်သည်အခြားတစုံတယောက်သောသူသည်။ အတွက်သတင်းအချက်အပင်အကြောင်းကိုတစ်မျက်၊၏တစ်ဝက်အမျက်နှင့်တယောက်ထွက်အမျက်နှင့်ပတ်သက်သောငွေပမာဏများအတွက်လျော်ကြေးအခြစ်စေဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်။ "ငါနှင့်အတူရှိ၏အနီရောင် Jafr။" အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟုသူမေးတဲ့၊"ဘာအတွက်အနီရောင် Jafr?" အစြန္းဟုဆို၊"အတွက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာကြောင့်သာဖြစ်ဖွင့်လှစ်အတွက်သွေးထွက်သံယို။ ပိုင်ရှင်အထားကိုဖွင့်လှစ်ရန်သတ်။" အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ကြောင်း'Abdallah ရွဗ္ေဘူရ 'fur မေးတဲ့၊"မေဖာက္ခြဲစောင့်ရှောက်သင်ကောင်းစွာ၊အ descendents၏မတော်တဆဤသိ? အစြန္းပြောသည်၊"ဟုတ်တယ်၊ငါကျိန်အားဖြင့်ရှာပါ၊သူတို့သိသလိုသူတို့အသိအညကညနေ့ကနေ့ဒါပေမယ့်ငြူစူနှင့်ဆိုင်သောအကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေသူတို့ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ငြင်းပယ်ချ။ ခဲ့သူတို့ရှာသောအမှန်တရား-အမှန်တရားနဲ့အတူကြောင့်ရှိသည်မယ်လို့ပိုကောင်းသူတို့အဘို့။"
လီရွဗ္ေဟင်ရှိသက်ဆိုင်သူ၏ဖခင်ထံမှရွဗ္ေဘူ'Umayr မွ'Umar ရွဗ္ေ Udhayna မွ Fudayl ရွဗ္ေ Yasar၊Burayd ရွဗ္ေတာ္မူ 'wiya နှင့် Zurarah သူအကြောင်းပြောဆိုကြပြီ'Abdallah ရွဗ္ေ'Abd-Malik ဆိုသည်ကိုအောက်ပါအဘူ'Abdallah၊"အ Zaydi ဂိုဏ်းနှင့် အယ်လ်-မူ 'tazali စုစက်ဝိုင်းပတ်လည်မှာ တာ္ရွဗ္ေ'Abdallah။ သူကဆိုဏာ?" အစြန္းဆိုသည်၊"ကျနော်ကျိန်အားဖြင့်တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအကြောင်းငါနှင့်အတူစာအုပ်နှစ်အုပ်ရှိပါတယ်ရှိသောအမည်အတိုင်းရောဖက်၏နာမည်တိုင်းရှင်ဘုရင်မယ်လို့စည်းကမ်းမြေကြီးပေါ်မှာ။ အဘယ်သူမျှမ၊ငါကျိန်အားဖြင့်တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏နာမတော်ကိုတာ္ရွဗ္ေ'Abdallah စာရင်းထဲမပါတစ်ဦးအဖြစ်သူတို့ကို။"
အယ်လ်-Jafr တွင်ဖော်ပြထားသည်အကြမ်း၏ တစ်ခုမှာထောင်နဲ့တစ်ည နဲ့တစ်ခုတိကျရှင်းပြ၏ 
↑ Oxford Islamic Studies Online: Kitab al-Jafr
↑ Babylon: Islamic Dictionary
↑ Imamreza.net: The Origins of the Knowledge of Ahl al-Bayt (A.S.), Source: Ahl al-Bayt (A.S.) in the Holy Qur'an and Hadith, By Ayatullah Muhammadi Rayshahri
↑ Imamreza.net: Collection of the Hadith by the Sh'ia
↑ Imamalinet.net: Ali the Magnificent, Compiled by Yousef N. Lalljee
↑ Imamreza.net: Imam Ali's Distinguished Place in Literary History
↑ Imamreza.net: Recognition of the Holy Imams (A.S.) in the Light of Traditions: Imam Ali Ibn Musa Al-Riza (a.s), By Ayatollah Sayyid Muhammad Reza Mudarrisi Yazdi
↑ Imamreza.net: Recordation of Hadith during the Imamate of Imam Baqir (A.S.) and Imam Sadiq (A.S.), By Sayyid Ali Al-Shahristani
↑ Henry Corbin, Trilogie ismaelienne, Paris: Maisonneuve, 1961, p. 30. The quotation is from Paul Kraus (Arabist), Jabir ibn Hayyan, v.2, Cairo, 1942, p.263. Reference may also be made to Corbin, "Le Livre du Glorieux de Jabir ibn Hayyan,” Eranos-Jahrbuch, v. 18 (1950), pp.75-87. See also Rajab Bursi, Mashariq Anwar al-Yaqin fi Asrar Amir al-Mu'minin (n.p, 1979), esp. pp. 18-38 (on this work see now Corbin, Rajab Borsi, and B.Todd Lawson, "The Dawning of the Lights of Certainty in the Divine Secrets Connected with the Commander of the Faithful by Rajab Bursi (d. 1411)," in Leonard Lewisohn, ed., The Legacy of Medieval Persian Sufism (London: Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1992), pp. 261-276. In addition see Futuhat, v. 1, pp. 231-361: "al-bab al-thani fi ma`rifa maratib al-huru”' ; and the well-known manual on magic by Ahmad al-Buni (d.1225), Shams al-ma`arif al-kubra.
↑ Al-huda.al-khoei.org: Al-Huda News: OTHER COLLECTIONS
↑ Shia-crescent.com: Defending the Imam of our time[လင့်ခ်သေ]
↑ CHAPTER NINETEEN: ON AL-REZA'S WORDS ON THE SIGN OF THE IMAM
↑ Imamreza.net: Recognition of the Holy Imams in the Light of Traditions: Imam Ali Ibn Musa Al-Riza : ‘Ithbat Al-Hudat, Vol. 6, p. 8: By Ayatollah Sayyid Muhammad Reza Mudarrisi Yazdi
↑ Kitab al-Kafi: Vol. 1, Hadith 635, Ch. 40, h1
↑ Kitab al-Kafi: Hadith 637 Ch. 40, h 3
↑ Kitab al-Kafi Hadith number 637 Ch.40, h 5
↑ Kitab al-Kafi: Hadith 641, Ch. 40, h 7
↑ Kitab al-Kafi, H 638, Chapter 40: Statements about al-Jafr, al-Jami‘ and the Book of Fatima, h 4
↑ Kitab al-Kafi, H 637, Chapter 40: Statements about al-Jafr, al-Jami‘ and the Book of Fatima , h 3
↑ Kitab al-Kafi, H 641, Chapter 40: Statements about al-Jafr, al-Jami‘ and the Book of Fatima, h 7
↑ Jafr ပူဇော်သောအားဖြင့် ရစ်ချတ်လန္ႏ Burton အတွက် အပိုဆောင်းညအတထောင်ညဉ့နှင့်ည(ခြောက်စစ္ၾ ၁၈၈၆–၁၈၈၈)။
Kitab-Kafi၊အခန်းကြီး ၄၀(ကအယ်လ်-Jafr၊အယ်လ်-Jami'၏စာအုပ်ခြဲ(က။ထည့္ပါ။))၊ ဘာသာပြန်ထားသောအားဖြင့်တာ္ Sarwar
Ilm အီး Jafar ဆော့ဖ်ဝဲကို
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Jafr_(book)&oldid=448348" မှ ရယူရန်
ပြင်ပလင့် သေနေသော ဆောင်းပါးများ since September 2011
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။